China pabrik fanamboarana lamba sy mpanamboatra | Lingshou
Loko lamba 4125
Fitaovana lamba 8013
Mica lamba 2-422
Mica lamba 2-076
Fampidirana ny loko flakes
Lavaky ny loko, izay antsoina koa hoe karazan-tsakitsaka, sombin-tsavony, flake na akorandriaka sns .. Izy io dia fitaovana nateraky ny mineraly silaky flaky. Amin'ny alàlan'ny dingana famokarana teknika, dia mamorona karazana haingo hena ho an'ny endriny izay natao ho vokatra voaravaka ampiasaina amin'ny plastika sy ny akora amin'ny alàlan'ny fikarakarana sehatra maro sy ny fitsaboana simika.
Ireo flakes tsy manam-paharoa ireo dia manome hazavana metaly voajanahary ary ny lalao mifanandrify tsara tarehy dia taratry ny vokarin'ny granita voajanahary sy marbra. Ity fijerena fahitana miverina amin'ny endrika voajanahary ity dia tsy ho tratrarin'ny fitaovana hafa. Noho izany, ny flakes loko dia manampy amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatrao mba ho fifaninanana bebe kokoa amin'ny tsenanao.
Fampiharana ny loko flakes
Ny flakes loko dia ampiasaina amin'ny fanaovana ABS, AS, HIPS, PP ary PVC miaraka amin'ny vokatry ny granita sy marbra amin'ny alàlan'ny tsindrona sy ny fitrandrahana. Ny flakes loko dia nandalo ny fanamarinana ny REACH SVHC. Manana ny porperties ny asidra sy ny alkali fanoherana sy ny fanoherana ny vatany izay manampy amin'ny fampihenana ny fiovan'ny vokatra plastika ary mahatonga azy ireo maharitra sy matevina kokoa amin'ny endrika.
Manaraka: Fanamboarana lamba
Fandraisana lamba 4019